Etu ịhọrọ otu arịa ụlọ dị mma maka ụlọ ịsa ahụ? - Dafne Italian Design
Home Ndụmọdụ na n'ike mmụọ nsọ Kedu otu esi ahọrọ ngwá ụlọ kwesịrị ekwesị maka ...
A na-ekwu na ụlọ ịwụ ahụ bụ kaadị nleta nke ụlọ ndị ahụ ma na-eleba ụlọ ịsa ahụ anya
ọtụtụ ihe banyere onye nwe ụlọ ịsa ahụ.
Nke a bụ eziokwu, dịka eziokwu bụ na ihe mbụ ị hụrụ n'ime ụlọ a
ulo bu ulo mkpochapu, nke a bu ihe ndi mmadu na-ahu karia ihe kariri. Ọ bụrụ na
ọ bụ eziokwu na ime ụlọ ịsa ahụ na karịsịa ụlọ ndị na-asacha ihe niile dị mkpa, ya mere ọ dị mma
na, n'ịkwado ụlọ ahụ, leba anya n'akụkụ a nke ụlọ ahụ na nke ya
ihe kachasị mkpa: ebe a na-asacha nkụ. E nwere ọtụtụ ụdị washbasin dị iche iche: ha
ha dịgasị iche iche na-adabere na akụkụ, ihe ndị ọzọ, na agba na ụdị nke washbasin ha na-akwado: ọ nwere ike
n'eziokwu, a ga-anakọta ya, na nke a, ọ ghaghị iburu n'uche na akụkụ ahụ dị n'akụkụ nke ngwa ụlọ
ọ ga-ejikwa akụkụ ala nke sink (nke ọzọ ma ọ bụ na-erughị ala) na-adabere na omimi nke
nke ikpeazụ!); ma ọ bụ na ọ nwere ike ịkwado ma na nke a, akụkụ ala nke akụkụ ụlọ ga-abụ
kpam kpam n'efu. Lelee ụdị dịgasị iche iche dị na tebụl dị na ya, na ihe kpatara ya
Ihe isi ike nke nhọrọ nke nwere ike inweta ya taa, anyị na Dafnedesign, anyị chọrọ igosi gị ụfọdụ ọdịdị
nke ulo na-asa akwa ma kọwaara gị ụdị ejiji, nke ụlọ ọrụ na nke gburugburu ha kachasị mma.
Iji malite ...
Anyị chọrọ ịmalite na obere washbasin a na omenala, ma wuru aka na nlebara anya na nkọwa. N'ịbụ nke e mere ma mee ka ọ dị site na studio Ịtali, ebe a na-asacha ya mara mma ma mara mma, ma ọ bara uru nke ukwuu, ebe ọ bụ na ọ na-enye nnukwu ego na ihe ndị na-eweta.
Ụdị RUSTIC / URBAN
Nke a bụ ụdị ncha akwa, nke kwesịrị ekwesị maka ebe obibi ugwu bụ ebe agba ọkụ nke osisi na-achịkwa n'ime ụlọ ọ bụla, ọ dịkwa mma maka ime obodo. Ụlọ ọrụ a na-asacha ihe nwere ọtụtụ ihe na-adọrọ mmasị na nke bara uru site na echiche dị mma: nke mbụ, nkwụ ahụ kpughere, nke a pụtara na akụkụ ahụ dị n'okpuru agaghị ejide ala mmiri ahụ. Ihe nke abụọ na-adọrọ mmasị na-enye site n'ogo elu nke nkwado, nke atọ nke dị mma ma dị mma, na-enye aka site na mpempe ike na wiil ndị nwere ike ịkwagharị na nkwụghachi ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, nke ikpeazụ na dị mkpa, bụ nnukwu mirror rectangular na oriọna Udo imeputa. Ọnụ: 2.879,00€ ị nwere ike ịhụ ya ebe ....
Site na mpempe akwụkwọ
Nke a bụ ụdị ọzọ nke ụlọ ụlọ ịwụ ahụ na-eji ejiji na-eme njem na-eme mkpọtụ / obodo. Nnukwu mbara igwe ma zuru ezu ime ụlọ ịsa ahụ gị, mara mma nke na-emetụkwa osisi na-emecha ma ụcha teal na-enye ebe obibi ime ụlọ ahụ ahụ dị jụụ ma dị ọhụrụ. Ihe a mejuputara nwere icha mmiri na udi omimi na omimi ya na-aba uru maka ozo di iche iche. Ma ohere dị n'etiti shelves, chests na ọnụ ụzọ, zuru oke ma ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ ihe, akwa na akwa na-echekwa. Enyo ahụ na-enwu ọkụ na-enwu, ebe nhicha a na-etinye n'okpuru oghere dịkwa nnọọ nro.
Ọnụ: 3.789,00€ lee nkọwa ndị a ebe a.
N'ihi na ndị na-ahụ n'anya Decume / Omuma ịke, qualitatively elu na nnọọ mara ụfọdụ n'ime ndụmọdụ anyị kacha mma:
Kedu ụlọ ụlọ ịwụ ahụ kachasị mma gị? Kedu ka ị ga-esi hụ ụlọ ịsa ahụ gị ọhụrụ? Anyị nwere mmasị n'ezie na echiche gị !!! Gwa ha na anyi na ihe di n'isiokwu a ... 😉
Kedu otu esi ahọpụta stovu pellet: ndụmọdụ ...